Inona ireo fomba ahazoana ny backlinks WordPress?
Backlinks dia fantatra koa amin'ny rohy mankany anaty na miditra. Ireo rohy ireo dia napetraka amin'ny pejy web iray fa manondro ny iray hafa. Amin'ny fampiakarana ny isan'ny rohy fidirana, ianao dia manangona ny lazanao eo amin'ny tranonkala. Izany no mahatonga ny teknolojia tonga lafatra hampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny loharanon'ny tranonkala iray ary mampahafantatra izany amin'ny mpampiasa. Ny isa sy ny kalitaon'ny backlinks dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny Google. Izany no mahatonga ny backlinks ampiasain'ny webmasters mba hampitombo ny toerana misy ny tranonkala ary hamorona tranonkala SEO kokoa. Raha asehon'ny rindranasa maromaro ny tranonkala iray, dia azo inoana kokoa ny fanadihadiana ataon'ny mpisera.
Inona ireo antony hamoronana WordPress backlinks?
Ny habetsahana sy ny kalitaon'ny backlinks dia singa manan-danja amin'ny fikolokoloana fikarohana. Ny rohy ivelany dia manana tombontsoa sasany amin'ny tranonkala fanatsarana amin'ny fanasongadina mpitsidika vaovao amin'ny tranokala iray ary koa amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny pejy web anao. Manana andraikitra manan-danja izy ireo amin'ny fanatsarana ny fototry ny mpanaraka sy ny fanentanana ny fanentanana marika. Ankoatra izany, ny rohy anaty dia mahasoa amin'ny heviny fa manatsara ny toeram-piompiana sy ny rohy mankany amin'ny tranonkala hafa.
Ahoana ny manampy ny backlinks amin'ny WordPress?
Ny mpampiasa webmasters izay mitantana loharanom-baovao maromaro miaraka dia afaka mampiasa feno backlinks mba hampifandraisana ny tranonkala tsirairay. Fomba tsara indrindra hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala rehetra. Na izany aza, misy tompona tranokala sasany dia mahatsiaro misavoritaka mba hamorona torolàlana azo antoka. Izany no antony hanangonanay torohevitra mahasoa hanampy anao hanorina backlinks tsara amin'ny WordPress:
Exchange backlinks amin'ny toerana hafa
Ny fomba tsotra sy organic Manangana backlinks azo atao dia ny manakalo azy amin'ny tranonkala hafa. Azonao atao ny mifandray amin'ny webmaster ao anaty fonosanao ary mametraka fifandraisana eo amin'ny samy lahy sy vavy. Azonao atao ny mangataka azy hametraka ny backlinks eo amin'ny tranonkalany miaraka amin'ny fepetra izay hataonao ho azy avy amin'ny anjaranao. Ity teknika mandresy fandresena ity dia mety ho anao sy ny tranonkalan'ny mpiara-miasa aminao.
Ny famoahana ny gazety
Zava-dehibe ny milaza ireo mpanjifa mety aminao momba ny vaovao sy ny fanovana eo amin'ny raharaham-barotrao. Ilainao ny manolotra ity fampahalalana ity amin'ny fotoana fohy sy amim-pahamendrehana ary zarao amin'ny sampana isan-karazany amin'ny famoahana gazety. Gazety an-tserasera malaza no mety havoakan'ny sasany amin'ireo tranonkalam-baovao avo vaventy izay mety hanome valim-bavaka anao ho toy ny mpanoratra miaraka amin'ny backlinks free.
Fitsipika momba ny vokatra
Fomba iray hafa fomba hanorenana rohy dia ny fanoratana fijoroana vavolombelona ho an'ireo entana na serivisy tianao. Raha ny fanamarinanao no mifanaraka amin'ny fepetra takiana, dia azo aseho ao amin'ny tranonkala izany. Ho vokatr'izany, ny mpanoratra dia hahazo valiny mahitsy. Ny fanadihadiana momba ny vokatra dia manana ny rohy amin'ireo mpanoratra izay mamorona azy ireo ary manao ny fijoroana vavolombelona azo itokiana.
Mampiasà fampahalalam-baovao sosialy
Afaka mahazo tombontsoa ianao amin'ny fampiasana sehatra media sosialy toy ny Twitter, Facebook, Twitter, Google+ ary hafa. Azonao atao ny mamorona eto ny kaontinao momba ny raharaham-barotra ary manisy rohy mankany amin'io tranonkala io. Mba hisarihana mpanjifa be dia be, mila manome hatrany ny mpanjifanao amin'ny votoaty vaovao sy mifanentana ary amin'ny fanomezana isan-karazany, fifaninanana, horonan-tsary ary ny infographics Source .